China Tractive မှုတ်စက်နှင့်ပေးသွင်းသူများ | RY AGRI
RY3W boom sprayer သည်လယ်ထွန်စက်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ ရောဂါနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားပိုးမွှားများ၊ သစ်ရွက်အာဟာရများနှင့် weedicide မှုန်ရေမွှားများအားပပျောက်ရန်အသုံးပြုသည်။
1.Pump: မြှေးအမျိုးအစား။ သံချေးပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ PTO နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်။ အမြင့်ဆုံးဖိအားသည်စက်ရုံအရွက်အောက်ပိုင်းမျက်နှာပြင်များကိုပင်ပက်ဖြန်းပေးသည်။
2. ဖိအားထိန်းချုပ်မှု - system control မှတဆင့် nozzle တစ်ခုစီသည်တူညီသောဖိအားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ မှုန်ရေမွှား၏အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးသေချာပါစေ။ ပက်ဖြန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလိုအပ်သည့်အတိုင်းရေမှုန်ရေမွှားအရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
3.Boom: ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်။ sagging / Self-level, ခိုင်မာတဲ့စန်းမရှိပါ။ ပေါ့ပါးသောသံမဏိ။ ခက်ခဲသောမြေပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်တည်ငြိမ်။ အဆင့်မြင့်သောအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးသီးနှံတစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းပက်ဖျန်းပေးသည်။ စန်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည်လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခေါက်နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို nozzle တစ်ခုအားကြံ့ခိုင်သောပလပ်စတစ်ပြွန်ဖြင့်စစ်ထုတ်သည်။ nozzle များအကြားအကွာအဝေးကို ၁၅ မှ ၃၀ လက်မအကြားညှိနိုင်သည်။ စန်းအမြင့်ကိုလယ်ထွန်စက်ဟိုက်ဒရောလစ်ထိန်းချုပ်မှုလှံတံဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
4.Nzzle: ကြာရှည်ခံသည့်အထူးပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၁ စတုရန်းမိုင်လျှင်ပေါင် ၄၀ ဖိအားရှိသော micron ၁၀၀ မိုက်ခရိုစက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပန့်သည်ရပ်တန့်သွားပြီးနောက်ရေမှုတ်ဆေးများစီးထွက်သွားခြင်းကိုတားဆီးပေးပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ \_ t
1. OEM ထုတ်လုပ်မှုကြိုဆို: ဖောက်သည်တံဆိပ်၊ အရောင် ...
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မေးမြန်းချက်ကို ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။
စက်ရုံလည်ပတ်မှု၊ ကြိုတင်တင်ပို့ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း ...